पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गर्दै आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७८ मंसिर १९ गते १३:१३ मा प्रकाशित
डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्री हुन् । संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका उनले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गरेका छन् । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा डा. महत परिचित छन् । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका डा. महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको केही अंश :
हो, कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन नसकेको पनि छ । भातृ सङ्गठन गठनदेखि अरू कतिपय विषयहरूमा यो अवस्था देखियो । तर, मूल कुरा त पार्टी सभापतिजीले पार्टी एकतालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुभयो । पार्टीमा कुनै पनि खाले विग्रह र असन्तुष्टि नबढोस् भन्नेमा उहाँ बढी नै सजग रहनुभयो ।
नेपालका कम्युनिष्टहरूबीचको एकताका कारण नेपाली कांग्रेस संसदमा सानो दल भएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा जसरी पनि पार्टीलाई एक बनाएर अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ र पार्टीले अबको निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने नै उहाँले मूल लक्ष्य राख्नुभयो । पछिल्लो समयमा संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत बिग्रह र असन्तुष्टिहरू आए र फुट्यो । यो अवस्था हेर्दा त पार्टी सभापतिले लिएको रणनीति सही हो भन्ने नै देखियो ।
पार्टीभित्रको यो उहाँको नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । उहाँ कसले के भने भनेर त्यसको पछि–पछि लागेर प्रतिवाद गर्नेतिर कहिल्यै लाग्नुभएन । देशको राजनीति कतातिर गइराखेको छ त्यसको सुक्ष्म यकिन गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यसैले त उहाँले अहिले देशको कार्यकारीका रूपमा नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै भन्नु न देशमा नेपाली कांग्रेसको बढी मत भए पनि सांसद सङ्ख्याका आधारले गर्दा कम्युनिष्टहरू सरकार निर्माणमा बलिया थिए । तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि उनीहरू अब देशमा ५० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे । तर उनीहरूले यही एउटै कार्यकालको भार पनि थेग्न नसकेर राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन देउवा नै आउनुप¥यो । हामी त संसद्मा सानो थियौँ । तर पनि नेपाली जनताले त स्पष्टरूपमा कांग्रेसले नै देश हाँक्न सक्छ भन्ने खाँचो महसुस गरे नि । त्यसैले उहाँ नै सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्यो । देशको संसद् बचाउन उहाँ नै अघि सर्नुप¥यो । उहाँमा पार्टीमा जस्तै देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर लान सक्ने, उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेकाले नै तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुप¥यो भनेका हुन् । त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई जिताएर लैजान र पार्टीेभित्रका असन्तुष्टि र विग्रहलाई पराकाष्ठामा लैजान नदिनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि अबका दिनमा उहाँजस्ता नेतृत्वको आवश्यक छ । उहाँले भनिरहनुभएको पनि छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टहरू मिल्दा कांग्रेसले हार ब्यहोर्नुप¥यो, अब सभापति भएर पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु र अबका निर्वाचनमा जिताउँछु । यसका लागि पनि आउँदो अधिवेशनमा उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ ।
हेर्नोस्, मैले जहाँ जिम्मेवारी लिन्छु त्यहाँ पूर्ण समर्पण र लगावका साथ काम गर्छु, गरेकै छु । म पार्टीमा रहँदा होस् या सरकारमा होस् मैले निष्ठा र पूर्ण लगावका साथ काम गर्ने गरेको छु । स्कुले जीवनदेखि पछिल्लो आन्दोलन, २०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्म नै मैले पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरेको छु । नेविसङ्घको स्कुल एकाइदेखि लिएर पार्टीको सहमहामन्त्रीसम्म मैले निष्ठाका साथ काम गरेको छु ।
नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन ? त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन ? यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन रु तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन रु यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा । तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मार्यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
नेपालप्रति हाम्रा मित्र तथा शक्ति रष्ट्रहरूको ठूलो सद्भाव छ । तर, पनि यसको फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौँ । हाम्रो यस्तो प्रवृत्ति छ कि राष्ट्रवादका ठूला कुरा जनतातर्फ फर्केर गर्ने र नारा लगाउने तर सम्बन्धित ठाउँमा भने राख्न नसक्ने । यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ र उता हाम्रा मित्र रष्ट्रहरूको सद्भाव प्राप्त गर्न पनि सकेक छैनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा या यहाँले भनेजस्तै पछिल्लो पटक भारतको भ्रमण गर्दा पनि यी पक्षहरूलाई थप स्पष्ट पार्ने काम मैले गरेको छु । (रासस)